Maxaan sameeyaa haddii qof uu igu halis? | USAHello | USAHello
Maxaan sameeyaa haddii qof uu igu halis?
Information si ay u caawiyaan qaxootiga iyo doolka amaan. In Maraykanka, bulshooyinka badan ee qaxootiga iyo soo galootiga ah waa in la dareemo cabsi iyo hanjabay. halkan waxaa ku qoran 10 waxyaabo aad sameyn karto haddii qof aad halis.
1) Wac boliiska: 911. Taleefanka ku sii.
Waxaan ognahay bulshooyin badan muhaajiriinta iyo qaxootiga ka baqaysaa booliiska. Si kastaba ha ahaatee, haddii laguugu hanjabay, waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto waa wac booliiska. Haddii aad tahay mid aad u cabsadeen inay soo wac, aad qariib ah weydiisan kartaa inaad wacdo boliiska kuu.
2) Inkasta oo aad weli on telefoonka booliska, qoraal saaxiib ama qaraabo.
U sheeg meesha aad joogto iyo waxa ka dhacaya.
3) Isku day in aad is dejiso. Si tartiib ah ka fog qofka ama dadka guuraan kuwaas oo ay kuu cagajugleeyaan.
Ha u sheegin qofka ay u dejiyaan. Taas ayaa ka dhigaysa wax ka sii xun.
4) Xusuusnow, dadka cunsuri ama rabshad aan kuwa buuxa. Ha ka hadlaan iyaga ama sharax wax iyaga.
Waxaa laga yaabaa jeer aad yeelan karaa wada hadalka shisheeye iyo caawin baro qaladka ah. Markii aad dareensan tahay cabsi ama ku hanjabay, waa in aad diiradda saaraan ammaankaaga.
5) Haddii aad ku hadasho af Ingiriis, ku hadlo Ingiriisi kuwa hareerahaaga ku wareegsan.
Dadka isagoo aan buuxin iyo dulmiga qabaa waxaa laga yaabaa in aad ka hadlayaan iyaga oo ku saabsan haddii aad luqad kale ku hadasho.
6) Weydii qof kale kuu dhow caawimo.
Sida ku cusub, laga yaabaa in aad dareento in ka cabsadeen inay weyddiiyaan caawimo. Cilmi baaris ayaa muujisay dadka ha ka qabato kooxaha, laakiin haddii aad weydiiso qof keli ah gargaar, waxay kaa caawin doonaan. U sheeg inaad cabsan oo soo dhawaanaya iyaga. Raadi qof daawashada ama dhoola aad ugu. Haddii qofka ugu horreeya ee aad weydiiso aanu ka jawaabin, weydii qof kale.
7) Haddii aad keligaa tahay, isku dayaan in ay sida ugu dhakhsaha badan ee suurto gal ah in meel dadweynaha.
Isku day in aad meel dad kale ilaa aad ka dareento ammaan.
8) Haddii qofka ku dhow aad u soo gelaysa oo aad cabsan, guuxi qaylo ah.
U sheeg in ay meel fog kaa joogo.
9) Ka dib markii aad adigu nabad tahay, sheegtid dhacdada.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo aad u sheegi kartaa waxa dhacay:
Waxaad u sheegi kartaa in line aan degdeg ahayn booliska ee gobolka. Gobolada intooda badan, Tirada tani waa 311.
Waxaad u sheegi kartaa in ay Southern Saboolnimada Law Center.
Haddii aad meel ganacsi marka ay dhacday (dukaan, tusaale ahaan) u sheeg ganacsiga.
Haddii aad baska ama tareenka ama tareen, u sheeg shirkadda gaadiidka dadweynaha ee.
Sidoo kale waa in aad soo sheegto macluumaad ah in aad dawladda hoose ama xafiiska duqa magaalada ee.
10) U sheeg madaxda bulshada ku saabsan waxa ku dhacay.
Waxay ka codsan kartaa kulan la bilayska maxalliga ah iyo saraakiisha loo doortay deegaanku in ay iyaga ka dhigi iyo war guud ee dhacdooyinka lagu beegsanayo bulshadaada.
Waxaa kaloo muhiim ah inaad u sheegto warbaahinta, dugsiyada, iyo ururada bulshada dhexdeeda oo ku saabsan dhacdooyinkan si ay u soo sheegi kartaa waxa dhacaya iyo in la dhiso wacyiga.
Sidee si ammaan on warbaahinta bulshada
Macluumaadkan waxaa loogu tala galay in wax lagu baro dadka cusub iyo caawisaa in ay dareemaan diyaar markay dareemaan in hanjabay in Maraykanka. Waxaa waa in aanay noqon sinaba loo arkaa talo sharci. Haddii aad u baahan tahay talo sharci ah, bartaan oo ku saabsan loo helo qareen lacag la'aan ah ama qiimo-yar ah halkan.